Yaynu jabhad u samaysanaa? | Berberanews.com
Yaynu jabhad u samaysanaa?
May 1, 2019 | Published by: Maax
Qoftkasta oo caqli lihi wuu garanayaa waxay jahbadi tahay khaasatan dadka ku dhaqan Somaliland.
Sida aynu wada ogsoonnahay Somaliland wax Ictiraaf ah ma haysato, macnaheedu wuxuu noqonayaa ilaa intay Ictiraaf buuxa ay ka helayso beesha caalamka waxay ahaaneysaa Somaliland dawlad diciif ah.
Dawlad diciifina waxay umaddu hananayso ma fulin karto, waayo sababa badan ayaan u saamaxayn oo ay kow katay DHAQAALE lacag tii (statement of Government) ay yeelan lacahay waxa ku fadhiya TIJAARTA IYO WADDAADADA oo isku milmay. markaa Somalidu waxay yidhaahdaa meel madax ka sarayso oo lasalaaxa majiro, waxaan uga jeedaa dee kolay dawladdu eed way leedahay lakiin miyaanay ka wanaagsannay inaynu is weydiinaa yaa ku wheliya dawlada eedaa?
Markaynu isla garano eedadaha oo aynu fuhnu markaa ayeynu heli karnaa xal lagu waaro, si loo helo xalkaa waxaynu ubaahanahay maskax caafimaad qabta. Waxaynu ka dharag sanahay dibad iyo gudaba marka lacag qaadanaynu dee BAANKA dhexe matagno ee TIJAARTA ayeynu u tagnaa waayo iyagiiba systemka gacanta ku fadhiya wadladuna iyaga yey hoostimadaa.
Markaa waxa inoo muuqda wadladda lafteedii ayaa af libaax kujirta oo firexfirex leh. Waxba koodhka weyn ha arkin. Midkaska oo timaadana ilaa inta Ictiraaf lahelaayo waa geediga wadaay waxba yaanay kolba qolo aanayn afka boodhka inoo soo marsan iska jiraay.
Dhenaca kale (bilaahi Calaykun ) yeynu jabhad usamaysanaynaa aynu se ku duu laynaa weynu is wada ognahay oo waxba inooma kala qarsoona, …waayo sidaynu wax ku dhisanay ayaa ah tribal system GUURTADA anigu ceeb uma arko laakiin marka aynu dawlad Ictiraaf saysato noqono ayeynu ka dadli doona….. markaa waxa dawladnimu tahay inta ka horaysa waxan aynu haysanu waa dhariye dhooba ah ee aynu wada dhowranu.